Isikhwama Sempesheni Sempesheni | I-FXCC ilungu le-ICF
Ikhaya / Mayelana / Kungani FXCC / Ukuvikelwa Kwemali Klayenti
I-FXCC ibilokhu izinikezele kumgomo ophakeme kakhulu wokuhambisana nokusemthethweni emhlabeni wonke, futhi ihlale ifuna ukunikeza ukuthula okuphelele kwengqondo kubathengisi bethu, noma nini lapho bethengisa khona nomaphi lapho kusekelwe khona. Ngakho-ke, ngenxa yokufinyeleleka kwethu emhlabeni wonke emazwenikazi asakhulayo, inkampani isiqinisekisile ukuthi uhlaka lwayo lwezomthetho luhambisane nezidingo ezidingekayo hhayi nje kuphela eYurophu, kodwa nangenxa yomhlaba wonke.
Izinqubo eziningi ezithathwe yi-FXCC zihamba ngaphezu kwezidingo ezisemthethweni ezisemthethweni ezibekwe ukusebenza emazweni ahlukahlukene. Senza lokhu ukuze sinikeze amakhasimende ethu zonke induduzo nokuzethemba, ukuze sihlale sizizwa silondekile ekusebenzelaneni kwabo nathi.
Ngomfanekiso wethu webhizinisi, impumelelo yethu ixhunyaniswe ngqo namakhasimende ethu impumelelo, futhi ngokuthembela nangokucaca, njengamagugu ethu ayisisekelo, sibheka ukwakha ubuhlobo obuqinile namakhasimende ethu, njalo sinesithakazelo esihle kakhulu engqondweni.
Ukuhlinzeka Ukuphepha kuyinto yethu
I-FXCC iqinisekisa ukuphepha nokuphepha kwamakhasimende ethu okuhweba ama-akhawunti. Ngaphezu kwalokho, zonke izicelo zezimali ziqashwe ngokucophelela ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwezimali nokuqinisekisa izinqubo zokusebenza kahle.
Ilawulwa futhi ilayisensi
Ukuba umthengisi olawulwa ngokugcwele futhi osungulwe kusukela ku-2010, sizimisele ukuphatha amaklayenti ethu ngendlela efanele ngokugxila ekuhlinzekeni kokuvikeleka kwamakhasimende nokuphepha kokuhweba.
Ukubambisana okuphumelelayo nesikhathi eside kwakha phezu kokwethemba. Ngenhloso yokuhlinzeka ngemibandela yokuhweba abadayisi abafuna, ukuthola inhlonipho kanye nokwethenjwa kwamaklayenti ethu, ngaleyo ndlela baqinisekise intshisekelo yabo, i-FXCC isebenza emfanekisweni weqiniso we-STP / ECN. Ngokwenza kanjalo, siqinisekisa ukuthi ukubonakala kungabikho ukuphikisana kwezintshisekelo.
Ukuvikelwa kwedatha eyimfihlo
Nge-protocol yethu yokuphepha kwenethiwekhi ye-Secure Sockets Layer (SSL), yonke imininingwane yamakhasimende ethu eyimfihlo igcinwa iphephile.
I-FXCC ihlale ikhomba, ihlola futhi ilawula uhlobo ngalunye lwengozi oluhambisana nemisebenzi yalo.
Ukuhlukaniswa Kwesikhwama seKlayenti
Zonke izimali zamakhasimende zigcinwe kuma-akhawunti ahlukanisiwe, ahluke ngokuphelele kunoma yikuphi futhi wonke ama-akhawunti ezinkampani ze-FXCC.
Amabhange Amabhange Asemhlabeni Wonke
Njengoba sizinikele ukuba sivikele izimali zabaxhasi bethu, zivikelekile kumabhange we-Leading International.